ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း-(၉) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း-(၉)
ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း-(၉)
Posted by aye.kk on Nov 21, 2012 in My Dear Diary | 30 comments
၉။ မျက်နှာအချိုး(၃)ချိုးညီပါက အရွယ်(၃)ပါးတွင်(၁)ပါးသုခချမ်းသာရ။
မိန်းကလေးများ၏ မျက်နှာအချိုးညီပါက အရွယ်(၃)ပါးတွင် (၁)ပါးသောအရွယ်၌ ချမ်းသာသုခ ခံစားရကြောင်း ကျမငယ်စဉ်အခါကတည်းက ဘကြီးပြောပြထားခဲ့ပါတယ် ။ ထိုစဉ်က ဘကြီးကို မျက်နှာအချိုး(၃)ချိုးညီတာ မသိနားမလည်၍ ရှင်းပြပေးပါရန် တောင်းဆိုမိခဲ့ပါတယ်။
မိန်းကလေးများ မျက်နှာအချိုး(၃)ချိုးဟု ဆိုရာတွင်
မိန်းကလေး၏ မျက်နှာပြင် အရှည်အား(၃)ပိုင်း အညီပိုင်းကြည့်ပါက အချိုးအစားညီမျှ နေပါလျှင် အရွယ်တစ်ပါးပါးတွင် ချမ်းသာသုခရရှိ နေထိုင်နိုင်တာ ရှင်းပြပါတယ် ။
အချိုးအစား ဘယ်လိုတိုင်းရမှာလည်း ပေတံနဲ့ တိုင်းရမှာလား မေးတော့ ဘကြီးက ကျမကို လက်ဖ၀ါး လက်ချောင်းများအားစုပြီး နဖူးအား လက်ချောင်း(၅)ချောင်းရှိသည့်အနက် လက်မဖယ်ခိုင်းပြီး ကျန်ရှိသည့် လက်ချောင်း(၄)ချောင်းအား ညီညီစုခိုင်းပြီး ဆံစနဖူးမှမျက်ခုံးအထိ အရှည်တိုင်းခိုင်းပါတယ် ။ ကျမနဖူးပြင်က ကျဉ်းတော့ လက်မထည့်ပြီး(၅)ချောင်းလုံးတိုင်းရင် မဆန့် ပါဘူး ။ လက်မဖယ်ပြီး တိုင်းကြည့်မှသာ ရပါတယ်။ ဘကြီးကတော့ နဖူးပြင်ကြည့်ပြီး မှန်းဆ၍ ကျမအား လက်မချောင်းဖယ်ပြီး တိုင်းကြည့် ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် ။
မိမိနဖူးပြင်က မိရဲ့ လက်ဖ၀ါးရှိ လက်(၄)ချောင်းနဲ တိုင်းကြည့်တော့ ကွက်တိပါဘဲ ။ နှာတံအပိုင်းကို တိုင်းကြည့်တော့ အနည်းငယ်လို နေပါတယ်။ နှာတံအောက်ဖက် မေးစေ့အပိုင်းအထိ လက်လေးချောင်းထက် နဲနဲပိုနေတာ သိရပါတယ် ။ အချိုးမညီပါဘူး ။ ဒါကြောင့် အရွယ်သုံးပါး တစ်ပါးချမ်းသာနိုင်တဲ့ကံ မပါတာ နားလည်ထားခဲ့ပါတယ် ။ မိဘကချမ်းသာတာ ဆင်းရဲတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ။
ကိုယ့်ဥပဓိရုပ်ရည်အရ မိဘမွေးဖွားလာစဉ် ကတည်းက ဖြစ်တည်လာတဲ့ ရုပ်လက္ခဏာ အပေါ် အင်္ဂရုပ်ကျမ်းမှာ
ဆိုထားသည့်အကြောင်း ဘကြီးက ကျမအား ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကျမရဲ့ လက်လေးချောင်းကတော့ ကျမနဖူးပြင်နဲ့ ကတော့ကွက်တိပါ ။ မိဘကတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ထားနိုင်တာ အမှန်ပါ ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို နဖူးလေးက ကွက်တိဖြစ် နေတာ (၁)ချိုးထဲကွက်တိ ဖြစ်နေတာကို ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ကြောင်း ။ အမြင်ရှင်းအောင် ဘကြီးကပြောပြပါတယ်။
ဘကြီးပြောပြတာကတော့ မိန်းကလေး မျက်နှာအချိုး သုံးပါးညီရင် တစ်ပါးကတော့ ချမ်းသာသုခပြည့်စုံစွာနဲ့ နေရသည့်
ကုသိုလ်ကံ အဘို့ ပါလာသည့် သူပင်ဖြစ်ကြောင်း ။ မိဘချမ်းသာတာ ဆင်းရဲတာနှင့် လုံးလုံးမသက်ဆိုင်တာ ထပ်မံရှင်းပြပါတယ် ။
ရုပ်လက္ခဏာ ၀ါသနာပိုးက ပါတော့တွေ့ သူမြင်သူကို လိုက်လိုက်ကြည့်ရတာ အမောပါဘဲ ။ ရင်းနှီးသူဆိုလျှင်တော့ လူကြီးမှန်းသိလည်း အားမနာပါဘဲ သိချင်စိတ်နဲ့ တိုင်းကြည့်ခိုင်းတာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ် ။ တစ်ခါက ကိုယ်နဲ့ လည်း ရင်းနှီးမှုက မရှိထား ။
အဒေါ်က မိတ်ဆက်ပေးလို့ထိုမိန်းမကြီးအား သိယုံမျှရှိသေး ။
ကျမကမျက်နှာကို ဖမ်းကြည့်ပြီး ထိုမိန်းမကြီး၏ မျက်နှာအား သူ၏လက်ဖ၀ါးနဲ့ ယူပြီးအတင်း တိုင်းကြည့်မိခိုင်းပါတယ် ။
အဒေါ်က မျက်စိမျက်နှာပျက်ပြီး အတင်းတောင်းပန် လိုက်ရပါတယ် ။
အဲဒီမိန်းမကြီးက အသက်(၄၀)ကျော် ၀န်းကျင်ပါ ။ သူက ကျမအဒေါ်ဆီမှာ ပိုက်ဆံလာချေးငှားတာ ကျမသိမြင်လို့သူမျက်နှာခန့် မှန်းပြီး ချမ်းသာမယ့်လူလား ဆိုတာကို စိတ်ကသိချင် နေမိပါတယ် ။ ထိုမိန်းမကြီးက သားသမီး မွေးထားတာ များပြီးအားလုံးကလည်း တက္ကသိုလ် တက်နေတဲ့အရွယ် ကလေးကျောင်းစရိတ်တွေ လိုအပ်နေလို့ ပိုက်ဆံလာချေးငှားတာပါ ။ ယောဂီဝတ်စုံ နွမ်းနွမ်းလေး ၀တ်ထားပါတယ် ။
အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပုံပေါက်နေပါတယ် ။ ကျမကတော့ ကျမသိထားတဲ့ ရုပ်လက္ခဏာ ၀ါသနာအရ ဟောပေးချင်မိတာပါ ။
အဒေါ်ဆီက ပိုက်ဆံချေးငှားပြီး ပြန်တော့မယ့်အချိန် ကျမက အဒေါ်ဟာ ဆင်းရဲမယ့်သူ မဟုတ်ဘူး အဒေါ်မျက်နှာက
မျက်နှာအချိုး(၃)ချိုးညီနေတာကို အမြင်နဲ့ မှန်းကြည့်လို့ စိတ်ကသိချင်ပြီး တိုင်းကြည့်မိခိုင်းတာပါ ပြောလိုက်တော့ ။
ကျမ၏အဒေါ်ကို ထိုမိန်းမကြီးက အစ်မဘဲရှင်းပြလိုက်ပါ ။ ရစရာ အမွေကလည်း မရှိ ။ ရတဲ့ယောက်ျားက ရုံးအုပ်။ ရာထူးကသာရှိတယ် အဆံမရှိ ။
မိဘက မွေးလာကတည်းက ဆင်းရဲ ။ လောကဓံတွေ ဘယ်လိုခံစား ရတယ်ဆိုတာကို ။ အစ်မကဘဲ ခလေးမကို ရှင်းပြလိုက်ပါဦး လို့ ပြောပါတယ် ။ ထိုမိန်းမကြီးက ရုပ်လက္ခဏာ ဆိုတာအယုံအကြည်မရှိ ။ နားလည်းမလည် သူယုံကြည်တာက ၀မ်းတခါးဝဘို့ အရေး ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ ရုန်းကန်ရတာကို ပြောပြလိုက်ပါ ဆိုပြီး ကျမ၏အဒေါ်အား ထိုမိန်းမကြီးကထပ် ပြောပြပြန်ပါတယ် ။
အစ်မရဲ့ တူမလေးမို့ အားနာမိကြောင်းလည်း ထုတ်ပြောပါတယ် ။ ထိုစဉ်က ကျမက အလယ်တန်း ကျောင်းသူအရွယ်ပါ ။
ထိုမိန်းမကြီးကလည်း သူ့ ပထမအရွယ် ဒုတိယအရွယ် ဆင်းရဲနှုံချာလို့ဒုက္ခတွေများမြှောင်လို့ ယခုအသက် ရလာသည့် အရွယ်၌ အပတ်တိုင်း ကုသိုလ်ရအောင် ဥပုသ်စောင့်တယ် ။ အခုရိပ်သာ ကအပြန်အစ်မဆီ ၀င်ပြီး ငွေခဏ လာချေးငှားတာ ။ ကျမလည်း ဥပုသ်တောင် ပျက်မလားမသိ ဆိုပြီး ။ ထိုမိန်းကြီး၏ ညီးထွားပြောဆိုနေသည့် စကားအသံများအား ကျမ ကြားသိမိရပါတယ် ။
ကလေးမလေးက အသက်ကငယ်လေးရှိသေးတယ် ။ ရုပ်လက္ခဏာပညာ ဟောစားနေပြီလား ဟောစားတဲ့သူလား
ကျမကိုကြည့်ပြီး ပြောဆိုတော့ ။အဒေါ်က ကျမကိုကြည့်ပြီး ငါ့တူမက တောကနေ ခဏအလည်လာတာ ။ ငါလည်းသူ့ ကို ရုပ်လက္ခဏာ ကြည့်တတ်တာ မကြည့်တတ်တာတွေ မသိပါဘူးအေ ။ ဆွေမျိုးဆိုပေမယ့် အနေတော့ဝေးပါတယ် ။ နင်အခုလာရင်း တိုက်ဆိုင်သွားတာ သူကလည်းလာခဲပါဘိ ။ သူ့ အဖေကလွှတ်ခဲပါတယ် ။ ဟောစားတဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုပြီး ထိုမိန်းမကြီးကို ရှင်းပြပြောဆိုပါတယ် ။
ထိုမိန်းမကြီးက ကျမကို ကြည့်ပြီး ။ ကယ်..ကယ်…သ္မီးလာပါဦး ။ သ္မီးစိတ်ချမ်းသာအောင် တိုင်းကြည့်ချင်သပ ဆိုရင် အဒေါ်မျက်နှာ
လာတိုင်းကြည့်ပါ ။ပေတံနဲ့တိုင်းကြည့်မှာလား ။ သေချာသွားအောင် ဆိုပြီး ကျမကိုပြောပါတယ် ။ ကျမက မဟုတ်ပါဘူး အဒေါ်ရယ် ။
မိမိလက်ဖ၀ါး နဲ့ ဘဲတိုင်းရတာပါ ။ ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ညာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လက်နဲ့ တိုင်းကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် ။
မျက်နှာအချိုး(၃)ခုညီရင် ဘကြီးက ချမ်းသာတယ် ပြောပြထားလို့ ပါ ။
ကျမကပြောတော့…. ။ အဒေါ်လုပ်သူနဲ့ ထိုမိန်းမကြီးတို့ နှစ်ဦးလုံး ကျမကိုကြည့်ပြီး သဘောကျနေကြတော့ ။ ကျမလည်း စိတ်ပျော်သွားပါတယ် ။
ထိုမိန်းမကြီးက စိတ်ရှည်စွာနဲ့ သူ့ လက်ဖ၀ါးပြင် လက်ငါးချောင်းစုပြီး နဖူးကိုအရင် တိုင်းကြည့်တော့ လက်မဖယ်ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့လက်လေးချောင်းလုံးစုပြီး တိုင်းတော့ အချိုး(၃)ချိုးညီစွာ အံဝင်ဂွင်ကျ ကွက်တိဖြစ်နေတာ ကျမမြင်တွေ့ ရတော့ ။ အဒေါ်က အမှန်တကယ် တတိယအရွယ်မှာ တကယ်ကောင်းစားပြီး ချမ်းသာမှာ အမှန်ပါဘဲလို့ ပြောပြလိုက်မိပါတယ် ။
သူက သဘောကျပြီး ပြုံးရယ်ပါတယ် ။ ချမ်းသာရင် ဟောထားတာလေး မမေ့ပါဘူး သ္မီးရေလို့ ပြောပြီး နှုတ်ဆက်ခါ ပြန်သွားပါတယ် ။
အခုတော့ ကျမ၏အသက်အရွယ်မှာ ထိုစဉ်က မိန်းမကြီး၏ အသက်အရွယ် ထက်မကသည့် အရွယ်သို့ ပင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ ။ မိန်းမကြီးက အခုချိန်မှာ အဘွားအိုအရွယ်ဖြစ်နေပါပြီ ။ ကျမ္မာပြီး ချမ်းချမ်းသာသာ နေထိုင်နိုင်နေတာ သိရပါတယ် ။ သားသ္မီးတွေ အားလုံးအကျိုးပေး ကောင်းမွန်ပြီး ချမ်းချမ်းသာသာ ထားထားတာသိရပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားလည်း အခေါက်ပေါင်းများစွာ လည်ပတ်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာ တစ်လှည့်နေလိုက် ဗမာပြည်ပြန်လာလိုက် နဲ့ ချမ်းသာသုခတွေ ခံစားရရှိနေတာကြားသိရပါတယ် ။
ဟိုတလောတုန်းက အဒေါ်နဲ့ စကားစပ်မိရာက သိရလို့ ဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ နားနဲနဲလေးသွားပြီး နားကြပ်တတ်ဆင်ခါထားပြီး စကားပြောနေရတာ သိခဲ့ရပါတယ် ။
ထိုမိန်းမကြီးကတော့ ကျမဟောပြောထားသည့် စကားအား အမှတ်တရ ရှိနေတာ မမေ့တာ သိရပါတယ် ။
ကျမကိုလည်းရန်ကုန်ရောက်လာရင် အလည်လာဖြစ်အောင်လာဘို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။
ရုပ်လက္ခဏာတွေရဲ့ ကံအကျိုးပေး ကောင်းမွန်မှုလက်တွေ့ တိကျ ။ မှန်ကန်မှုရှိနေခဲ့တာကို ဗဟုသုတအဖြစ် ။
ပြန်လည်ပြောပြ ဝေမျှခြင်းသာလျှင် ဖြစ်ပါတယ် ။။
၂ ချိုးပဲ ညီကြောင်းပါ…မချမ်းသာရင် နေပါစေ..ခုထက် မဆင်းရဲရင် တော်ပါပြီ..
နောက်အပိုင်းတွေလည်း စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုနေပါမယ်နော်…
ဗဟုသုတအဖြစ်ပြန်လည်ဝေမျှတာဟာ ၀ါသနာရှိသူ စိတ်ဝင်စားသူတို့ အား
သိစေချင်သည့် စေတနာသက်သက်မျှသာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တိုင်းတာ ၂ခုပဲ ညီသလိုလိုရှိတယ် မနက်မှအိမ်ကလူတွေ ကို တိုင်းကြည့်ခိုင်းအုန်းမယ်
ဘယ်သူများ ညီမလဲလို့ ။
အဲ့ဒီမှာအေးရောပေါ့နော်။ ဒီမှာတော့ ဟိုရက်က မိုးတွေ စိုစိစိနဲ့ မိုးပြီးတော့ အေးလာတယ်။ဒီနေ့ အအေးပေါ့တယ် ။ ရာသီတွေလည်း ဖောက်နေပါပြီ။ ဂရုစိုက်နော် အန်တီအေး။
ဒီနေ့ညလည်း ငလျင် ကောလဟာလတွေကို ပလူပျံနေတာပဲ ။ သေတနေ့ မွေးတနေ့ပဲသဘောထားလိုက်တော့တယ် ။
အေးတဲ့ရာသီကပိုပြီး သတိထား ဆင်ခြင်နေရတယ် အစားအသောက်ကအစပါ ။
ငလျှင်ကိစ္စက ထိုင်းသတင်းမှာလွှင့်တာ သတိပေးတာ သိရပေမယ့် ဒီမနက်အထိ ဘာမှဖြစ်တာမရှိပါ။
သတိကပိုတယ်မရှိဘူးလို့ သဘောထားပြီး နေလိုက်ပါတယ် ။ ။
မွန်ကစ်လည်း နှစ်ချိုးဘဲ ညီတယ်..
ဒါပေမဲ့ ဗဟုသုတ ရရှိလို့ အန်တီအေးကို ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်..
နောက်အပိုင်းများ ရှိရင်လည်း ဆက်ဆက်စောင့်နေပါတယ်လို့….. :hee:
အင်း……. အဲ့တိုင်းဆိုရင်တော့ နောင်ရေး စိတ်အေးရပေါ့ တီအေးရယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :hee:
(ဦးကြီးကြောင် မလာခင် ဦးအောင်ရေးရတာ..ဟိ)
ကျနော့ မှာ အစ်ကို ရှိဘူးဗျ။ အရင်းက လည်း မောင်လေးတစ်ယောက်တည်းရယ်။
နှဖူးကျဉ်းတဲ့အတွက် ၃ ချိုး မညီတဲ့အထဲ ပါပါတယ် …
အခုတလော အန်တီအေးရဲ့ ရုပ်လက္ခာတွေနဲ့ ရုံးကလူတွေကို လိုက်တိုက်ကြည့်နေတာ …
ကျွန်မကြည့်ရသလောက်တော့ သူဌေးဖြစ်မယ့် ရုပ်လက္ခာမျိုးက ခပ်ရှားရှားရယ် (အစိုးရရုံးမို့လို့လဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော် …)
အားလုံးကပေါက်ချင်လို့ ထီထိုးပေမယ့်ပေါက်မဲကတစ်ဆုထဲသာ။ သူဋ္ဌေးဖြစ်မယ့် ရုပ်လက္ခဏာမျိုးက ရှားပါတယ် ။ ကံပါဘဲ ။ ထီထိုးသလိုပါ ။အစိုးရရုံးမို့ လို့ လဲပြောလို့ မရပါဘူး။ ရှေးပြုခဲ့တဲ့ဝိပါက်ကံတွေအရ ရုပ်လက္ခဏာတွေဟာလည်း ကွဲပြားခြားနားလာကြလို့ ပါ ။
အယုတ် အလတ် အမြတ်မရွေး သူပြုခဲ့တဲ့ အတိတ်ကံ(သံသရာ) အတ္တအကြောင်း တရားတွေကြောင့်သာ ရုပ်အကျိုးတရားတွေ ဖြစ်တည်မှုဟာ ပဋိသန္ဓေတည်ရှိလာထဲကပါလာကြတာပါ ။ ဘကြီးက ရုပ်လက္ခဏာ အကြောင်းကို ဘုရားကျန်းဂန်တွေမှာ ဆိုထားခဲ့တာ ဖတ်ရှုပြီးသိရတဲ့အတွက် ငယ်စဉ်ကလေး ဘ၀ကတည်းက အန်တီကို ပြောပြလာခဲ့တော့ စိတ်ဝင်စားပြီး ၀ါသနာပါတဲ့အပြင် ရုပ်လက္ခဏာ သဘောတွေကို သိမြင်ယုံကြည်လာမိပါတယ်။။
ဒေါ်လေးကေ ရေ ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်သွားပါတယ်
ချစ်ဖို့ ပဲ အဓိကလို့ သာ မှတ်ယူထားပါတယ်
အန်တီအေး ရဲ့ ရုပ်လက္ခာနှင့်သိကောင်းစရာ post တိုင်းကိုဖတ်ဖြစ်ပါတယ်
နဖူးကျဉ်းရင်ဘာလို့အပျိုကြီး လုပ်စေချင်တာလဲ ဆိုတာအဆင်ပြေရင်ရှင်းပြပါနော် ။
တိုက်ဆိုင်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ် သမီးတို့အိမ်မှာအစ်မတစ်ယောက်က နှဖူး
ကျဉ်းတယ် သူ့နဖူးက ကကြီးပုံလေး အသက်လဲ ၃၀ ကျော်ပြီ အခုထိအပျိုကြီးပဲ
တစ်သက်လုံးအပျိုကြီးလုပ်မယ် ဆုံးဖြတ်ထားတယ် ။ နောက်တစ်ခုက အလုပ်
အတူတူလုပ်ခဲ့တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှဖူးကျဉ်းတယ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်
နဲ့အ်ိမ်ထောင်ကျပြီး အိမ်ထောင်လဲမမြဲဘူးနှစ်ဆက်တောင် အန်တီအေးပြောတာ
၀မ်းသာမိပါတယ်။ နဖူးကျဉ်းရင်လင်ညှင်းဆဲခံရ နိုင်တာ
ဘကြီးက အင်္ဂရုပ်ကျမ်းမှာ ဖတ်ရှုလေ့လာ သိမြင်ထားတာကို ရုပ်လက္ခာနှင့်ပတ်သက်ပြီး
အကြောင်းကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်ရင်း အန်တီ ဒုတိယတန်း ကျောင်းသူအရွယ်က
မေးမြန်းခဲ့ရာက ပြောပြ ခဲ့ဘူးပါတယ်။ တကယ်လည်း မှန်ကန်မှု ရှိနေတာ
နှစ်များစွာကြာ လေ့လာချက်များအရ အန်တီကိုယ်တိုင် သိရှိရလို့ အိမ်ထောင်
ရုပ်လ္ခကာနှင့် သိကောင်းစရာမှာ ဆက်လက်ရေးသား ဖော်ပြပေးပါမယ် ။
မိန်းကလေးနဖူး ကကြီးပုံ (စစ်စစ်)ပါတာက စာပေဘက်မှာ လေ့လာလိုက်စား ၀ါသနာ အထုံပါတာ သိရပါတယ် ။
အသိပညာ အလိမ္မာရှိသူ ဆိုရမှာပါ ။ မိန်းကလေး နဖူးကျဉ်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
အိမ်ထောင်မြဲတာ မမြဲတာက သည်းခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ(ခံနိုင်တာ၊မခံနိုင်တာ)
မိမိ၏စေတနာနဲ့ မိမိပြုလုပ်တဲ့ကံတရား အပေါ်မှာသာ မူတည် သက်ဆိုင်လွန်းလှတယ်လို့ ပဲ အန်တီထင်မြင် ယုံကြည်မိပါတယ်။။
အန်တီရေ.. မသိလို့နော့.. ယောက်ျားလေးကို မျက်နှာအချိုးအဆ
သုံးခုညီနေရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဗျ… နှာရောင်ကောက်ပြီး
မျက်နှာခွက်တဲ့ မိန်းမတွေက ယုတ်မာတယ်ဆို မှတ်သားဖူးပါတယ်..။
Metal Power ကို အားထားပြီး နှာဖူးကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး
အာရုံယူပြီး ဟောတာမျိုးတော့ လေ့ကျင့်ဖူးပါတယ်… (တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပါ)..
ကိုရင်က ပညာရေးကံမကောင်းတော့ အားလုံးတစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့
အန်တီ ပေးမယ့် ၀ိပဿနာ ရှူ့နည်း လမ်းညွှန်လေးလည်း
မျှော်နေပါတယ်… ခုတော့ မိုးကုတ်ဘက်ကို လေ့လာနေပါတယ်ခင်ည…။
အန်တီအနေနဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုပြောပြချင်တာက…..ယောက်ျားလေးကိုလည်း
မျက်နှာအချိုးအဆ သုံးခုညီရင် အရွယ်သုံးပါး တစ်ပါးချမ်းသာနိုင်ကြောင်းပါဘဲ။
နှာယောင်ကောက်ပြီး မျက်နှာခွက်တဲ့မိန်းမတွေက ယုတ်မာတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ပြန်လည် ရှင်းပြချင်ပါတယ်….ယောက်ျားလေးဖြစ်စေ မိန်းကလေးဖြစ်စေ
အဆင်းအင်္ဂါရုပ်လက္ခာအရ…နှာယောင်ကောက်ပြီး နဖူးမောက်ရင် ကောက်ကျစ်(ယုတ်မာ)ပါတယ်။
သားကောင်ရဖို့ အတွက် မျှားယောင်းသွေးဆောင် လိမ်လည်သိမ်းသွင်းလှည့်စားပြီးမှ ယုတ်မာစားသုံးရသလို
မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် မြေခွေးနည်းတူကောက်ကျစ်တဲ့ နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့
သူများ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အန်တီပြောပြချင်ပါတယ် ။
၀ိပဿာနာရှုနည်းလမ်းညွန်ပေါ့နော် ။မဟာစည်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားတဲ့ ယောဂီသိဖွယ်အသွယ်သွယ် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ် (၀ိပဿာနာ ရှုနည်း)လမ်းညွန်စာအုပ် ဖတ်စေချင်ပါတယ် ။
၀ိပဿာနာ တရားအားထုတ်ရာမှာ တရားကိုယ်တိုင်ကျင့်သူများ အတွက် လွန်စွာအကျိုးရှိ အသုံးဝင်တာ သိခဲ့ရပါတယ် ။
တည့်မတ်လမ်းညွန်မှု အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်း လက်တွေ့ သိခဲ့ရလို့ 
စည်သူဆီကို စာအုပ်ပို့ ပေးချင်ပါတယ် ။ ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာ သိချင်ပါတယ်။
အချိုးညီမညီပေတံနဲ့ တိုင်းကြည့်လို့ လည်းရပါတယ်။။
ရုပ်လက္ခဏာတွေ အကြောင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ …။
အခု မျက်နှာအချိုးအစား ညီတဲ့အကြောင်းကိုလည်း မှတ်သား ထားလိုက်ပါတယ် ….။
ကျနော် မိန်းမ ယူမယ်ဆိုရင်တော့
အိုက်ဒီလို ညီတဲ့ မိန်းမမျိုးကို ရှာယူမယ်ဗျာ ..
အိုက်ဒါ ကောင်းဘူးလား … နောက်တာပါ …
သိသူတွေဖော်စားနိုင်အောင်လို့ သိသမျှ ဗဟုသုတအဖြစ် ချရေးလိုက်ရပါတယ်။။
နဖူးကျဉ်းတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေး ကံ မကောင်းတာတွေ့ဘူးပါတယ်။
ပြီးတော့ (အချစ်ရေးမှာ)သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲ နီးစပ်ရာကိုတွယ်တတ်တာတွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်တော့ အတွယ်ခံရတဲ့ ချစ်သူက စိတ်သဘောထား နိမ့်တဲ့ ယောက်ကျားမျိုးဆိုရင်
တန်ဖိုးထားမခံရခြင်းမျိုး၊ သစ္စာအဖောက်ခံရတာမျိုးနဲ့ တွေ့ရပါတော့တယ်။
အဲဒီလိုသူတို့ကို ပြန်ပြီး မတွယ်တာဘူးဆိုရင်တော့ တွယ်တာမဲ့သူကိုရှာတတ်လို့
ခဏခဏ အချစ်သစ်ပြောင်းဆိုတာတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာပါတယ်။
ဆိုလိုတာက အဲဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးဟာ ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားချစ်မဲ့ယောက်ကျားမျိုးဖြစ်ရမဲ့အပြင်
အဲဒီယောက်ကျားရဲ့ စိတ်သဘောထားမြင့်မြတ်မှုကိုပါထည့်စဉ်းစားပြီး ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီလိုလူမျိုးနဲ့ ဆုံခဲ့လို့ အဆင်ပြေသွားသူများလဲရှိပါတယ်။
နောက်တခု အထူးသတိထားမိတာက အနီးကပ်လူကို အရမ်းတွယ်တတ်တာပါဘဲ။
ချစ်သူ မဟုတ်တဲ့၊ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းအချင်းချင်းဆိုရင်တောင်မှ
အနစ်နာခံတတ်ကြတယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှူတွေ
ဖယ်ပြီးတော့ကို ချစ်သူပြောသမျှ ဒါမှမဟုတ်ခင်မင်တွယ်တာနေတဲ့ သူငယ်ချင်း
သူတို့ချစ်ပြီ/ ခင်ပြီဆိုရင်အရမ်း တွယ်တာတတ်ကြတာမို့ တဘက်ကကြည့်ရင် သနားစရာပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောနဲ့ တဘက်မှာလဲ သူတို့လုပ်ချင်လာပြီဆိုရင် ရှေ့နောက်မစဉ်းစားဘဲ
ဇွတ်လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်သွားဖြစ်သွား ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ကိုလုပ်တာမျိုးပါ။
အဲဒီလို လမ်းမှားကရတဲ့ ရိုက်ခံမှုဒါဏ်ကြောင့် သူတို့လေးတွေမှာ စိတ်နာကျည်းစရာ၊ စိတ်ဒါဏ်ရာရစရာ
နောက်ခံအတိတ်တွေ “အသက်အရွယ်”အလိုက် ခံစားရရှိကြရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အဆိုးထဲကအကောင်း ကိုပြောရရင်တော့ အဲဒီလိုအမျိုးသမီးလေးတွေဟာ ဘာသာရေးကိုတော့ အထူးလေးစား
တတ်သူများဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။စိတ်ထားအခြေခံ သာမန်လူတွေထက် ကောင်း သူများလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားမှုကို ဦးစားပေးမယ်၊လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို သေသေခြာခြာအထပ်ထပ် စဉ်းစားပြီးမှချင့်ချိန်လုပ်မယ်
ဆိုရင် အဲဒီလိုမိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘဝတေ သာယာလှပမယ် လို့ တွေးမိတာလေးကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အကောင်းဆုံးbest comment အဖြစ်ရွေးလိုက်ပါရစေ။(ပြောပြထားတာတွေမှန်ပါတယ်)
ဘကြီးပြောပြခဲ့တာ မှတ်သားထားတာ ဗဟုသုတအဖြစ် ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောပြချင်ပါတယ်။
နဖူးကျဉ်းတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ ရှေးပြုခဲ့တဲ့ အတိတ်ဝိပါက်ကံဝဋ်ကြွေး ပါလာမှုအရ
အိမ်ထောင်ပြုရင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့အနိုင်ကျင့်မှု (ကာယကံ၊၀စီကံ၊မနောကံ)တစ်ပါးပါးအရပြစ်မှားပြုမူ
ကျူးလွန်ခြင်းခံရမည့်သူ ဖြစ်လို့ အိမ်ထောင်မပြုသင့်ကြောင်း။
အင်္ဂရုပ်ပညာအား အသေးစိတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ထပ်မံ ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တာက နဖူးကျဉ်းသည့်အပြင်
ထိုသူမိန်းကလေး၏ ခြေညိုးဟာ ခြေမထက်ပိုရှည်တာ တွေ့ မြင်ရပါက ။ တဇွတ်ထိုးဆန်သည့် စိတ် ။
နားခံ မလွယ်တဲ့စိတ် ။ မိမိစိတ်အလို ဆန္ဒအား ဦးစားပေးလွန်းသည့်စိတ် ။
ရှိမရှိ တို့ အား ထပ်မံစီစစ် ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ခြေမနဲ့ ခြေညိုး(အတို၊အရှည်)တူညီနေရင်တော့
နာခံလွယ်တဲ့သူ (အိမ်ထောင်မပြုဘဲနေနိုင်သူ) ဖြစ်လို့ 
ထိုအိမ်ထောင်ရေး ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ချမ်းသာ ကာကွယ်နိုင်တာကို ဘကြီးကပြောပြခဲ့ပါတယ် ။။
မ aye.kk ရေ ။
၃ ခု တူတယ် သိလား ။
ဒီအတိုင်းဆို ချမ်းသာရချည်သေးရဲ့ ။ ဟီ ဟိ ။
မြန်မြန် ချမ်းသာပါစေ ။
ဒါနှင့် ၊ မ aye.kk ရဲ့ e-mail address ကို ၊
အဘ e-mail ပို့ထားသေးတယ် ၊ ရလားမသိ ။
အဘဖော e-mail ရောက်ပါတယ် ။